Rabshado ka socda Maraykanka - BBC News Somali
Rabshado ka socda Maraykanka
Image caption Rabshado ku baahay magaalooyin cusub oo Maraykanka ku yaala
Magaalooyin cusub oo dalka Maraykanka ah ayaa waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo askariga cadaanka ah ee dilay wiilkii madowga ahaa ka dibna ay maxkamadu diiday in askariga maxkamad ka saaro.Dibadbaxyadii ka dhacay New York ilaa Seatle ayaa ahaa kuwo si nabad ah ku dhacay. Balse waxay rabshado ka dhaceen Oaklan iyo California
Sidoo kale deganaan la’aan ayaa ka jirtay magaalada Ferguson. Booliskana waxay xireen 44 qof balse magaalada kama aysan dhicin rabshadihii dhacay isniinta oo kale Askarigii dilay wiilka madowga ah ayaa sheegay inuusan niyad ahaan ku talo gelin xumaan. Dilkan wiilkan oo dhacay bishii Agoosto 8-deedii ayaa abuuray isbuucyo degenaan la’aan ah ka dhacday magaaladda Missouri.
Askariga wiilka dilay ayaa sheegay inuu qabsaday shaqadiisa. Magaaladda Ferguson oo dadka madowga ah ay ku nool yihiin ayaa dalbaday in askariga wiilka dilay la soo taago maxkamad laguna oogo dacwad dil ah. Balse xeerbeegtida maxkamada ayaa go’aansatay inaan askariga dambi lagu soo oogin
Qareenada u doodayay qoyska wiilka la dilay ayaa xukunka maxkamada ku tilmaamay mid aan qxaq ahayn